केपी र प्रचण्ड कम्युनिष्ट नै होइनन् - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
केपी र प्रचण्ड कम्युनिष्ट नै होइनन्
प्रकाशित मिति: 26 July, 2020 12:40 pm
अरुण घिसिङ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटव्यूरो सदस्य हुन् । हिजोसम्म पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा रहेका उनी अहिले आएर उनै प्रचण्डले गलत बाटो लिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । माओवादी चरित्र र एजेण्डा छोडेकाले नै प्रचण्डको बाटो फरक परेको उनको भनाई छ । अझै पनि महान जनयुद्धको सफलताको चर्चा गर्ने उनी अबको वैकल्पिक शक्ति भनेको आफ्नै पार्टी भएको दावी गर्छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच पार्टी एकता भएपछि बनेको नेकपाको वास्तविक दिशा र सही चरित्र नभएको बताउने उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि जनतालाई घात गरेको टिप्पणी गर्छन् । आगामी निर्वाचनबाट आफ्नो पार्टी उदाउने दावी गर्ने उनी संविधानमा गणतन्त्र लेख्दैमा जनताले त्यसको आभाष पाउन नसकेको बताउँछन् । आफ्ना अध्यक्ष गोपाल किरातीले उठाएको एजेण्डामा देश अघि बढेको भए अहिलेसम्म धेरै परिवर्तन भइसक्थ्यो भन्ने उनीसँग गरिएको समसामयिक कुराकानी–
0 तपाइहरुको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले के गर्दैछ ?
– हामी खासगरी अहिले पार्टी निर्माणमा लागेका छौं । पछिल्लो समयमा विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालेका छौं । देश सही बाटोमा नहिँडेकाले हामीलाई चिन्ता लागेको छ । हाम्रो पार्टी खास माओवादी भएकाले यही लाइनमा फर्काउन हामी लागिपरेका छौं । हिजो बुझेर वा नबुझेर माओवादी छोडेकाहरु अहिले नराम्ररी पछुताएका छन् र फेरि सँगै बसेर राजनीति गर्ने भनेर फर्कदैछन् यसमा आमी खुशी छौ । जसले जे भने पनि हामीबाहेक अरु माओवादी हुनै सक्दैन ।
भाषणमा मात्र माओवादी भन्ने विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोण गलत भएकालाई हामीले संरक्षण गरेका छैनौं । हामी अहिले अभियानका क्रममा जहाँ गएका छौं त्यहाँ राम्रो रेस्पोन्स पाएका छौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एम्सिसी) को बाटो गलत भएकाले जनतामाझ यही सन्देश लिएर गएका छौं । कोरोना महामारीको रोकथाम गर्न सरकारले सकेको छैन, सरकारले जे गर्नुपर्दथ्यो त्यो गरेको छैन । अभावलाई देखाएर सरकार भने अवैध रुपमा लुट्ने र सयौं वर्षसम्मलाई सन्तानलाई पुग्ने गरी असुलीमा लागेको छ । सरकार र उसका कार्यकर्ताले गलत भ्रम फैलाएर आफूले के के न राम्रो काम गरेको भन्दै जनतालाई अल्मल्याउन थालेका छन् । हाम्रो पार्टीले लकडाउनमा कम्तीमा ३ महिनासम्म प्रत्येक नागरिकलाई १० हजार रुपिँया उपलव्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका थियौं, सरकारले सुनेन यसमा साह्रै दुःख लागेको छ ।
0 तपाइले यति धेरै आवाज उठाउनुभयो तर पनि सरकारले किन सुनेन ?
– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको कान छ सुन्दैनन्, दुइवटै आँखा छ तर पनि देख्दैनन् । राम्रो ज्यान छ, सुन्दर टाउको छ तर पनि दिमाग छैन भने फरक पर्दैन । उनीहरु अलिकति गम्भीर भएको भए यी समस्याको निकास निस्कन्थ्यो । उनीहरु अहिले पार्टीको आन्तरिक झगडामा छन्, सत्ता स्वार्थभन्दा उनीहरु माथि उठ्न सकेनन् । कोरोना भाइरसको यत्रो त्रास हुँदा पनि सरकार भएको महसुस जनताले गर्न पाएनन् । सरकार लकडाउनमात्र गर्ने तर त्यो सँगै गर्नुपर्ने तयारी नगर्ने गरेकाले संकटमा प¥यो । लकडाउन मात्र गरेर समस्याको समाधान नहुने भएपछि अन्त्यमा खुलाउन वाध्य हुनुप¥यो । तर खुशीको कुरा के छ भने अन्य देशको जस्तो कोरोनाको प्रकोप यहाँ भएन, एक किसिमले हामी खतरामुक्त भएका छौं तर पनि यो बेला सावधानी अपनाउनु जरुरी छ । लकडाउनमा पीडित भएका सबै मानिसलाई सरकारले केही राहत दिएको भए अहिले सरकारको जय जयकार गाउँथे सबैले तर उनीहरुले त्यो सोच्न सकेनन् । सरकार जनताप्रति गम्भीर जिम्मेवार छ भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भयो ।
0 पार्टी विस्तारमा छौं त भन्नुभयो तर प्रगतिचाँही कहाँकहाँ के भयो ?
– हामीप्रति जनताको विश्वास नभइदिएको भए अहिले यसरी हाम्रो पार्टी र हामी त्यसका नेता भनेर हिँड्ने वातावरण नै हुने थिएन । सबैको समर्थन, सुझाव, उत्साह र विश्वासले नै हामी बलियो भएका छौं । कार्यक्रमको सिलसिलामा जहाँ गएका छांैं त्यहाँबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं । हिजोको खास माओवादी हामी हौं भनेका छौं । हिजो जनताले प्रचण्डबाट धेरै आशा गरेका थिए । १७ हजार मान्छे पनि त्यत्तिकै मरेका थिएनन् । माओवादीले नै युग परिवर्तन गर्छु भनेर हिड्यो होला भने तर अहिले आएर उनीहरुको सबै योजना अपूरो भएर जनतामाथि नराम्रो घात भएपछि त्यसको सबै जिम्मा हामी लिन्छौ राम्रो कामको लागि भनेर नै अघि बढेका छौं । के जनयुद्ध प्रचण्ड, बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र भएको थियो र ? पक्कै होइन । अहिले पनि धेरै मानिस पीडित छन्, कति अंगभंग, अपांग, टुहुरा र भोका छन् उनीहरुको लागि त्यो माओवादीले केही गरेन अब यो माओवादीले गर्छ भन्ने विश्वास दिलाउँछु । एकदिन होला जनतालाई ढाँटेर राजनीति गर्न सकिन्छ, सधैं झुटको खेती सम्भव छैन त्यसैले हामीले नयाँ विचार र धारलाई समातेर अघि बढेका हौं । जहाँसम्म लाग्छ हामी अरुभन्दा फरक छौं, जनताको भावनाभन्दा टाढा जान्नौ ।
प्रचण्डले एक समयमा माओवाद मानेन भने त्यो कम्युनिष्ट हुन सक्दैन भनेका थिए अहिले त्यही भनाई सिद्ध भएको छ । आम श्रमिक, मजदुर र सर्वहाराको मुक्ति नभएसम्म वास्तविक राजनीति सम्भव छैन । अधिकार र पहिचानको सवालमा हामी सबैभन्दा अघि छौं । प्रचण्डले अहिले यी सबै पुराना मुद्धा विर्सिएका छन् । यही हामी पनि गलत दिशामा लाग्यौँं भने फेरि अर्को पटक नपत्याए हुन्छ मन नपरी मतदान नगरे हुन्छ तर कल्पनामा बगेर सबै पार्टी उस्तै त हुन् नि भनेर एउटै व्यवहार गर्न भएन ।
0 त्यसो भए आगामी निर्वाचनमा कसरी जानुहुन्छ ?
– चुनाव उपयोग गर्ने हो । चुनावमा गएपछि परिणाम नआउला भन्ने प्रश्नै छैन । हाम्रो पार्टीको इतिहास छ त्यो मेटिन दिन्नौं । म पनि काभ्रेबाट प्रतिस्पर्धा गर्छु ।
0 नेकपाको एकतालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– यो त बाघ र बाख्राको मिलनजस्तो हो, यति भनिसकेपछि थप व्याख्या गरिरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन । हामीले सुरुदेखि नै जुन शंका गरेका थियौं अहिले त्यस्तै भएको छ । त्यो पार्टीको एउटा निश्चित विचार र सिद्धान्त छैन । उनीहरु अझै पनि जनताप्रति जिम्मेवार र वफादार बन्न सकेका छैनन् । एकपटक जनतालाई ठाँट्न र झुक्याउन सकिन्छ तर सधैं त्यस्तो व्यवहार राज गर्न सक्दैन । पार्टीमा सिद्धान्तको बहस नै भएको छैन । सत्ता र शक्तिको मातले उनीहरु नराम्रोसँग पिरोलिएका छन् । अहिले पनि एमाले र माओवादी भनेर नै व्यवहार गरिएको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने लक्ष्यमा छैनन् उनीहरु । साँच्चै भन्ने हो प्रचण्ड एमालेमा प्रवेश गरेर विलय भए ।
0 सरकारको २९ महिने कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्ने ?
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर सरकारले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा प्रकाशन गरेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । हामी राजनीति गर्नेले सधैं अर्काको विरोध गर्नुभन्दा पनि राम्रो कुरालाई राम्रो भन्न सक्नुपर्दछ यो इमान्दारिता पनि हो । तर सँगै भूमि फिर्ता आउँछ कि आउँदैन भन्ने जटिल प्रश्न हो । सरकार जनताको पक्षमा संवेदनशील बन्न सकेन । नेकपाकै नेताहरु सरकारसँग असन्तुष्ट छन् हामीले नराम्रो भयो भन्नै पर्दैन । नेकपाकै नेताहरु सरकारसँग असन्तुष्ट छन् हामीले नराम्रो भयो भन्नै पर्दैन । राम्रो भएको भए त जनता सडकमा आएर सरकारको पक्षमा नारा जुलुस गर्थे होला त्यस्तो कतै देखिएको छैन । कोरोनाकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो सरकारले केही गरेन । १० अर्व रुपैयाँ कोरोनामा खर्च भएको छ भनेर सरकारले झण्डै दुई महिनाअघि नै भनेको थियो । अहिले त त्यो खर्च बढी भयो भन्ला सरकार तर जनताले त्यो अनुसार राहत र उपचार पाएका छैनन् । बिल मिलाएर खाने कुरामा भने सरकार सफल भएको छ ।
0 प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको भूमिका चित्तबुझ्दो छ कि छैन ?
– काँग्रेस पनि दूधको साक्षी विरालोजस्तो छ । खाने कुरामा सबै मिलेका छन् । जनताको पक्षमा आवाज उठाउन काँग्रेसले पनि सकेको छैन । यतिमात्र होइन राष्ट्रपति भण्डारी नेकपाको सल्लाहकारजस्तो भएर सक्रिय रुपमा राजनीतिमा सक्रिय छिन् यो राम्रो लक्षण होइन । भण्डारी एमालेकी त्यतिबेलाकी उपाध्यक्ष हुन् उनले त्यो पद बिर्सेकी रहिनछिन् ।
0 संघीयता र संविधानमा तपाईहरुको धारणा के ?
– गणतन्त्र नाम मात्रको छ । गणतन्त्रमा जनताले केही पनि पाएका छैनन् । १० वर्षे जनयुद्धको भावनालाई संविधानले सम्बोधन गरेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई लत्याइएको छ । २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानजत्तिको पनि यो संविधान छैन । संविधानमा धेरै कुराहरु अपुग छन् । हाम्रा पार्टी अध्यक्ष गोपाल किराँतीले त्यतिबेला आठसय जिल्ला बनाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । वास्तवमा अहिले यो नै सान्दर्भिक जस्तो लाग्छ । हामीले समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको माग गरेका छौं ।
0 माओवादीको नाममा धेरै पार्टीहरु छन् । उता, विप्लपको पार्टी पनि छ । उसले गरेका कृयाकलाप सही कि गलत ?
– सरकारले विप्लब नेतृत्वको माओवादीलाई राजनीतिक पार्टीका रुपमा मान्यता नदिनु दुःखद हो । उसले गरेका राम्रा कामका पक्षमा हामी सधैं सकारात्मक मान्नेछौं भने पार्टीले गरेका गलत कामलाई गलत नै छ भनी त्यस्को खण्डन गर्दछौं ।